I-Dreame T20, isicoci sevacuum esikumgangatho ophezulu, esisebenza ngokuphezulu [Uphononongo] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 22/11/2021 12:00 | ngokubanzi, Reviews
Nasiphi na isixhobo sobuchwepheshe esijolise ukwenza ubomi bakho bube lula wamkelekile kwiGajethi ye-Actualidad, kwaye ayinakuba ngenye indlela kunye nezicoci ze-vacuum eziphathwa ngesandla, imveliso ethatha indawo yabacoci berobhothi kwaye ngenxa yemisebenzi yayo kunye nezibonelelo ngamaxesha angcono aya kuba ngcono. imveliso yomnqweno.
Fumana kunye nathi ukuba isebenza njani iDreme T20 kwaye ukuba ifanelekile na xa ithelekiswa nabakhuphisana nabo abakhoyo ngexabiso elifanayo.
1 Izinto eziphathekayo kunye noyilo, uphawu lwendlu
3 Ukuzimela kunye nezixhobo
Izinto eziphathekayo kunye noyilo, uphawu lwendlu
I-Dreame yaziwa ngokuzahlula kancinane kwezinye iinkokeli zeli candelo ngokunikezela ngoyilo lwayo kunye nezixhobo ezizikhethileyo ezifana nezo sizibonileyo kwiimveliso zangaphambili. Le Dreame T20 ayinakuba ngaphantsi, isicoci sevacuum esenziwe ngaphandle kwiplastiki ekhanyayo enemithunzi eyahlukeneyo yegreyi, ngelixa izincedisi zenziwe ngeplastiki ye-matt graphite grey kunye nezibiyeli zentsimbi kwi-aluminium ebomvu. Konke oku kusinika imveliso elula, engadluli kwi-1,70 grams.
Yithenge ngexabiso elifanelekileyo Amazon.
Iguquguquka kwaye iyaxhathisa, ngaphaya koko kunokuqhayisa ngokwenza kwayo. Izinto zibonakala zidibene kakuhle, kwaye zifanelekile Qaphela ukuba sinesikrini se-LED ngasemva esisinika ulwazi olwaneleyo lokusetyenziswa kwayo, kunye neqhosha lokulawula amanqanaba ahlukeneyo amandla kunye nokutshixa, ukuze ungadibanisi nesikrini ngokungazi. Inkqubo ye "action" ye-vacuum cleaner isebenzisa i-trigger, ebekwe kwisibambo, ngoko ke isicoci se-vacuum siya kusebenza kuphela xa sicinezela. Nangona kubasebenzisi abathile bangonwabanga ngakumbi, ngokobuqu ndikhetha ukuba bavule / bacime kuba singakwazi ukulawula ngcono amandla kwaye ngakumbi ukuzimela.
Uninzi lwenu luxhalabele amandla kuphela, ke siza kuyityhila njengenye yedatha yokuqala. Kwinto iDreame ibonelela ngayo njenge "turbo mode" siya kufikelela kwi-25.000 pascals, oku kungaphezulu komndilili ophakathi kwe-17.000 kunye ne-22.000 abacoci bavacuum badla ngokunikezela phakathi koluhlu lwamaxabiso. Kwelinye icala, sinesihluzi esisebenza kakuhle kakhulu, esixhaphakileyo kolu hlobo lwemveliso, ewe, akulula ukutshintsha okanye ukucocwa njengoko kusenzeka kwiinguqulelo zangaphambili (kunye nexabiso eliphantsi) le-Dreame hand vacuum cleaners. , Ndicinga ukuba ukwenzela ukukhusela ukuvuza.
Ngokuphathelele idiphozithi, inikezela ukuya kuthi ga kwi-600 milliliters, idiphozithi, njengoko sele iluphawu lophawu, ivulwa ngokucinezela iqhosha kuphela kwaye isinika ithuba lokubeka iintsalela ngokulula. Enye yezona zinto ndizithanda kakhulu malunga nezicoci zokufunxa zeDreme kukulula kokukhupha la matanki kunye nomthamo wazo, esele ndiwulindele ukuba uphezulu kancinci kunoko kuqinisekiswa luphawu ngokwalo.
Ukuzimela kunye nezixhobo
Ngoku siza kuthetha ngebhetri yayo, sine-3.000 mAh iyonke ukuba intlawulo epheleleyo iya kuthatha malunga neeyure ezintathu ukuba sisebenzisa itshaja efakwe kwiphakheji, nokuba sisebenzisa isikhululo sokutshaja okanye hayi. Ngokomntu, ndihlala ndincoma ukuba isikhululo sokutshaja silungile kuba siququzelela zombini isenzo sokusidibanisa kunye nokugcinwa kwezixhobo ezingenakubalwa ezinazo. Lilonke basiqinisekisa imizuzu engama-70 yokuzimela kwimodi ye- "eco", encitshiswe kakhulu kwimodi ye "turbo". Nokuba kunjalo, sifumene iziphumo ezisondele kakhulu kukuzimela okuqinisekiswe nguDreame.
Ngokumalunga nezixhobo, umxholo webhokisi yale Dreame T20 ngokungathandabuzekiyo iyamangalisa ngenxa yonikezelo olubanzi, nantsi into esinayo:
Ukwandiswa ityhubhu metal
Ibhrashi ye-Smart Upholstery eguquguqukayo
Isiseko sokutshaja esinezikrufu ezibandakanyiweyo
Umbhobho ochanekileyo omncinci
Umbhobho ochanekileyo obanzi
ityhubhu eguquguqukayo yeekona
Ngaphandle kwamathandabuzo, awuzukusilela nantoni na ngale Dreame T20 njengezixhobo, Kude ngasemva ezinye iimpawu "eziphezulu", uninzi lwazo kufuneka zithengwe ngokwahlukeneyo.
Ngethuba lokusetyenziswa kwemihla ngemihla imbonakalo yethu ibe yinto enhle, ngakumbi ngengxolo, engadluli kwi-decibels ezingama-73 kwimodi ye "turbo", abafana baseDreame basebenze kakuhle kakhulu kumbandela wengxolo kwaye ibonisa, ngakumbi ukuba sithathe ingqalelo. into yokuba ayilimazi amandla. Kwelakhe icala, Ukuba basinika iibhetri ezisusekayo sisiqinisekiso, zombini ngendlela yokutshintshwa, kunye nenyaniso yokuba sinokuzilungisa kwaye akufuneki ukuba silahle imveliso ngokupheleleyo ngenxa yokuba ezinye iiseli zebhetri ye-lithium zonakaliswe.
Ndiyayikhumbula into yokuba i-accessory yomtshayelo ibandakanya ukukhanya okuncinci kwe-LED esinceda ukuba sifumane ngcono ukungcola, kungenjalo, inyaniso yokuquka ibrashi ye-Smart Adaptive Ibalulekile kuthi thina banezilwanyana zasekhaya njengoko isinceda ukuba sisuse iinwele kwisofa nakwimpahla yethu ukuba siyafuna.
Ngokumalunga nezixhobo, le Dreame T20 igqibelele kakhulu kwaye inyani yeyokuba asiphosi kwaphela nantoni na, imveliso ejikelezayo kulo mba. Kwelakhe icala, iskimu sombala sinobuhle kwaye ngaphezu kwayo yonke into ihlala ixesha elide.
Sijongene nemveliso ukuba nangona ingabizi, Iya kuba malunga nee-euro ezingama-299 ngokuxhomekeke kwindawo yokuthengisa, isinika ezinye iindlela ezingapheliyo, enye yezona zinto zizimeleyo ezizimeleyo kwiimarike kwaye ngokuqinisekileyo isiqinisekiso seDreame, inkampani ye-veteran enegama elihle kwicandelo. Ewe, ayisiyiyo "uluhlu lokungena", kodwa abo bacacileyo ukuba bafuna olu hlobo lwemveliso baya kufumana kwiDream T20 iqabane elihle kakhulu, siyifumene iyimveliso ejikelezayo kwaye besiyifuna. ukwabelana nawe ngayo .
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 22 ukusuka kwi2021
Utshintsho lokugqibela: NgoNovemba 22 ukusuka kwi2021
Uluhlu olubanzi lwezincedisi
Ifana kakhulu nezinye iinguqulelo zeDreme
Akukho LED kumtshayelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Dreame T20, umgangatho ophezulu kunye nomsebenzi wokucoca ukucoca ngesandla [Uhlalutyo]